Maamulkii hore ee DDS oo lagu eedeeyay xabaal wadareed laga helay Itoobiya – AwKutub News
Maamulkii hore ee DDS oo lagu eedeeyay xabaal wadareed laga helay Itoobiya
Leave a Comment on Maamulkii hore ee DDS oo lagu eedeeyay xabaal wadareed laga helay Itoobiya
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xabaalihii la helay ay ka koobanyihiin 200 oo qof oo la dilay lixdii sano ee la soo dhaafay kadib markii ay ku banaan baxeen mamulkii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida.
Warkan ayaa noqonaya wararkii ugu danbeeyay ee ka soo baxay xabaalahan laga helay gobolka saliidda hodanka ku ah ee dowladda deegaanka Soomaalida kaasoo uu hadda Madaxweyne ka yahay Mustafa Cumar oo ballan qaaday in uu wax ka badali doono xadgudubyo uu maafiyanima uu ku tilmaamay ee horay uga dhacay gobolka.
Booliska ayaa dalbaday in la siiyo muddo 14 maalmood ah si ay usii wadaan baaritaanada socda iyada oo illaa shan qof oo uu ku jiro madaxweynihii hore ee gobolka Cabdi Maxamuud lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen xadgudubkaas. Cabdi Maxmuud ayaa iminka waxaa ku socota dacwad ku saabsan xadgudubyo ka dhan ah xaquuqda aadanaha ah.
Ciidamada booliska Itoobiya ayaa sheegay in ay la soo ogaaday xabaal wadareed ay ku aasan yihiin meydad ka badan 200 qof meel ku taalla xuduudda gobolka Soomaalida iyo Oromoda.
Booliska ayaa sidoo kale sheegay in ay fulinayaan amar Maxkamadeed oo ku aadan in baaritaanno lagu sameeyay dilal ay geysteen ciidamada daacad u ahaa madaxweynihii hore ee gobolka Soomaalida Itoobiya kuwaas oo iminka u xiran amar Maxkamadeed.
Bishii Agoosto ee sanadkan ayaa saraakiil Itoobiyaan ah waxa ay sheegeen in weerar ay fuliyeen ciidamada Liyu Bookis lagu dilay 41 qof laguna dhaawacay 20 kale.
Hay’adda xuquuqda aadanaha u doodda ayaa ku baaqay in baaritaanno lagu sameeyo xadgudubyada ka dhanka ah banii aadanimada oo ay geysteen ciidamada Liyu boolis.
Tags: CMC DDS Itoobiya Soomaalida Wararka Xabaal
Previous Entry Madaxweyne Farmaajo oo la Kulmay Ra’iisal Wasaaraha Talyaaniga iyo waxay ka hadleen
Next Entry Madaxweyne Farmaajo Oo La Kulmaya Dhigiisa Dalka Turkiga